Chii icho, chinoshanda sei uye ndechei? MaReaders ese
Caliber Inotakurika: Chii icho, chii chaicho uye kuti inoshanda sei
Eder Esteban | | Caliber, General
Munyika yeReaders pane pfungwa idzo vashandisi vazhinji vanoziva nadzo. Zuva rega rega tinosangana nemamwe mazita, izvo zvinoita kuti vave chimwe chezvinhu zvakajairika kwatiri. Zita rinogona kunge richizivikanwa nevakawanda ndiCaliber Portable. Kunyangwe paine vanhu vazhinji vasingazive chaizvo kuti chii. Naizvozvo, isu tiri kuzotsanangudza zvimwe kwauri pazasi.
Saka kuti iwe ugone kunyatsoziva chinonzi Caliber Portable uyezve nezvatingaishandise uye nemashandiro ayo.. Nekudaro, kana zvikazoitika kuti chiri chinhu chekufarira, iwe unogona kuwana zvakanyanyisa kubva pazviri. Wagadzirira kuziva zvese nezve ichi chishandiso?
Chinhu chekutanga chatichaita ichatsanangura zvishoma nezveCaliber Portable, zvazvinosanganisira uye ndedzipi mashandisiro ayo makuru. Pamusoro penyaya pfupi yekushanduka kwayo kubva payakasvika pamusika. Ruzivo rwakakosha kuitira kuti uve nerakajeka pfungwa nezvazvo.
1 Caliber Inotakurika: Chii icho uye ndeyei?
2 Caliber Inotakurika Nhoroondo
3 Maitiro ekurodha pasi Caliber Portable
4 Iyo Caliber Portable inoshanda sei
Caliber Inotakurika: Chii icho uye ndeyei?
Iyo yemahara e-bhuku maneja. Inotibvumira nyore kurongedza uye kuronga e-mabhuku. Izvo zvazvinoita kuchengeta mabhuku mudhatabhesi uye zvobva zvatibvumidza kutsvaga chaizvo chaizvo izvo zvatiri kutsvaga. Tinogona kazhinji kuchengeta mabhuku anoenderana nezvakawanda zvakasiyana paramende senge zita, munyori, muparidzi, kana zuva rekuburitsa Nenzira iyi, zviri nyore kwazvo kuti isu tive nezvose zvakanyatsorongeka. Saka kana taenda kunotsvaga chimwe chinhu tinotora yakawanda nguva.
Kobo Aura Imwe ongororo
Pamusoro peizvi, Caliber Portable inotipa mamwe akawanda sarudzo. Sezvo isu tichigona zvakare kuishandisa kushandura mafomati. Ichi chirongwa chekutenda kwatinogona kushandura maBooks kuita akasiyana mafomati. Zvakanaka kana isu tine maReader anopfuura imwe uye tinoda kushanda nemamwe mafomati. Mune ino kesi, chirongwa ichi chinopatsanura pakati pekuisa uye zvinobuda mafomati:
Mafomu ekuisa: ePub, HTML, PDF, RTF, txt, cbc, fb2, lit, MOBI, ODT, prc, pdb, PML, RB, cbz uye cbr
Mafomu ekubuda: ePub, fb2, OEB, lit, lrf, MOBI, pdb, pml, rb.3
Saka isu tinogona kushanda neese aya marudzi emafaira nekutenda kune iyi software. Saka chishandiso chinomiririra kugona kwayo kwakawanda., sezvo ruzhinji rwevashandisi vanogona kurishandisa. Sezvo inotsigira mafomati makuru eBook anobatwa nhasi.
Isu zvakare tine mukana wekushandisa iyi software ku enzanisira e-mabhuku pakati pezvimwe zvishandiso. Haasi ese mamodheru pamusika ane rutsigiro, nekuti izvi zvinogumira kuAmazon Kindle, mamwe maSony mamodheru uye zvakare iyo iPhone ne iPad. Asi vashandisi vazhinji vanogona kubatsirwa kubva pachinhu ichi.
Pakupedzisira, tinogona kushandisa Caliber Portable kune chimwe chinhu. Sezvo zvinotibvumidzawo kutsvaga nhau. Tinogona kuimisa kuitira kuti itore hanya yekutsvaga uye otomatiki inotitumira nhau kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo hazvigoneke kuzviita neese mawebhusaiti, kungoita neimwe iyo iyo kambani ine chibvumirano nayo. Asi tinogona kuwana nhau kubva kuBBC, The New York Times kana Wall Street Journal pane yedu eReader.
Chii chinonzi ISBN uye ndechei?
Caliber Inotakurika Nhoroondo
Iyo kambani yakagadzira iyi software ndeyeCaliber, iyo yakatanga basa rayo muna 2006. Kovid Goyal ndiye musiki uye muvambi wekambani. Chimwe chezvikonzero zvekugadzirwa kwekambani ndechekuti panguva iyoyo pakanga pasina zvishandiso zvemhando yepamusoro izvo zvaibvumidza iwe chinja mafaera kuiyo LRF fomati yakashandiswa nevaverengi vaSony panguva iyoyo. Saka iwe waita sarudzo yekushandisa iyo inoshandura faira.
Neiyi nzira, iwe unogona kushandura akanyanya kufomerwa ebook mafomati pamusika kuita LRF fomati. Shanduri iyi yakava budiriro huru uye mukurumbira weCaliber wakakwira.. Sezvo nguva yakapfuura, musiki wekambani akaona muunganidzwa wake wemabhuku emagetsi achikura zvakatsiga. Asi, manejimendi uye manejimendi avo anga achiwedzera kuipa.
Nokudaro, ndakafunga kugadzira chimiro chingaite kuti zvive nyore kuronga ese e-mabhuku iyo yawanga wakachengeta paReader yako. Izvi zvakava izvo zvatinoziva iye zvino seCaliber Portable. Zita rakasarudzwa nekuti rinomiririra rusununguko, nekuti iri yemahara uye yakavhurika sosi chirongwa. Saka vese vashandisi vanogona kuzvishandura.
Nhasi uno nharaunda hombe yakaumba yakatenderedza kambani. Kune vazhinji vanogadzira uye vanoedza vane basa rekugadzirisa uye nekuunza maficha matsva, pamusoro pekutsvaga mabugs muchirongwa. Mukuwedzera, yakashandurwa mumitauro yakasiyana-siyana. Nekuti Caliber Portable inoshandiswa munyika mazana maviri kutenderera pasirese nhasi. Muenzaniso wakanaka wekubudirira icho chishandiso chave nacho.
Kukura kwayakasangana nako kwave kusiri iko kwakaitika netsaona. Nekuti Izvo zvave zvichizivikanwa nekorona seimwe yeanonyanya kushandisa maturusi pamusika. Sezvawaona kare, tinogona kuishandisa kune akawanda akasiyana mabasa. Kubva pakuronga edu e-mabhuku kuenda kushanduko pakati pemafomati. Naizvozvo, chave chakakosha sarudzo kune vazhinji vashandisi.
Maitiro ekurodha pasi Caliber Portable
Chirongwa chinogara chichigadziriswa, muchokwadi yekupedzisira kugadzirisa kwaive kupera kwaKurume. Naizvozvo, kuvandudzwa kunounzwa nguva zhinji, kuwedzera mukuvandudza kwekuchengetedza. Saka chirongwa chakachengeteka uye hachizokupe matambudziko erudzi chero rupi zvaro.
Tinogona kurirodha pasi zvakananga kubva kune webhusaiti yekambani, uko isu zvakare tine mukana wekuyedza demo. Nekudaro, isu tinogona kuona kana iri sarudzo inotinakidza isu kana kwete. Iwe unogona kushanyira webhu uye kurodha pasi ese iwo maemo uye chirongwa mune izvi link. Zvakare, tinogona kurodha pane chero system inoshanda uye zvakare kurodha vhezheni ye USB. Nekudaro, isu tinogona kuiisa gare gare pane chero chishandiso chatinoda. Saka zviri nyore kwazvo kurodha pasi.
Iyo webhusaiti yepamutemo haisi iyo yega nzvimbo inowanikwa neCaliber Portable. Nekuti pane zvimwe akawanda mapeji ewebhu ekurodha pasi zvirongwa zvakaita seSoftonic kana CCM kwatinogona kurodhaunira. Idzo ndidzo sarudzo zvakare dzakachengeteka. Saka paisazove nematambudziko kana iwe uchida kurodha pasi chirongwa kubva kune chero chazvo.
Chinhu chakakosha kana uchitsvaga chirongwa ichi kurodha pasi kubva pamapeji akavimbika uye akachengeteka. Izvi zvakakosha, nekuti nenzira iyi tinodzivirira kutyisidzira kuti tisapinda mukomputa yedu.
Iyo Caliber Portable inoshanda sei
Iyo Caliber interface iri nyore kwazvo uye yakasununguka kushandisa. Pa webhusaiti pachayo tine demo rinowanikwa kwatinogona kuona kuti raizoshanda sei pakombuta. Unogona kushanya pano uye ona kana iri dhizaini iyo ingave nyore kwauri kuti ushandise. Naizvozvo, hapana mushandisi anozove nezvinetso kushandisa chishandiso ichi. Iwe unozoona kuti yakasununguka kwazvo, pamusoro pekukupa iwe kwakawanda kushandiswa kwakasiyana.
Iwe unogona kuronga ako ese eBooks nenzira yakapusa uye saka zvichave zviri nyore kwazvo kuti iwe uwane zvese zvawakachengeta pane yako kifaa. Uye zvakare, isu tinogona kuronga mabhuku zvinoenderana neparameter yatinoda (munyori, zita, muparidzi, zuva rekuburitsa, ISBN ...). Nzira iyo inonyanya kugadzikana kwatiri kuronga.
Pamusoro tine bharanzi mairi isu tinowana dzakasiyana sarudzo idzo Caliber Portable inotipa. Tinogona kuona edu ese mabhuku uye isu zvakare tine iyo chishandiso chinotibvumira kuti tivashandure mune mamwe mafomati. Saka kana tichifanira kushanda neimwe fomati panguva ipi neipi yakapihwa, tinogona kuishandura tichishandisa chishandiso nenzira yakapusa.
Tinogona zvakare kuvatumira kune chimwe chishandiso zvakanaka kwazvo, yedu eReader mune iyi kesi kana kunyange iPhone kana iPad. Chinhu chinotiratidza kuti chishandiso chakasiyana-siyana uye chinotipa mikana yakawanda. Saka usazeze kurodha pasi Caliber Portable, sezvo ichizokubatsira zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » General » Caliber Inotakurika: Chii icho, chii chaicho uye kuti inoshanda sei
Parizvino handigone kufungidzira ndine raibhurari yega mae-mabhuku pasina chirongwa ichi.
Mushonga wakakwana wekurwisa mafomati e-ebook ane hunyanzvi uye masystems akavharwa
Sony inodzokera kune iyo nyika yeReader neiyo Sony DPT-CP1
Chii chinonzi Mobipocket Creator, inoshanda sei uye ndeyei?